Talaikene dia manana fomba fijery amin'ny tontolo manodidina azy. Famoronana an-tserasera
Teboka roa haneho hevitra. Ny iray dia ny tsy fisian'ny manaja tena rehefa mpanao sary, mpanao hosodoko na mpanakanto ianao ary izany dia mitarika anay tsy hahafantatra ny fomba hankasitrahana izay tena noforonin'ny tànany. Faharoa, ny fahatsapana fa afaka mandrangitra ny hafa amin'ny fomba fijerinao hafa noho ny anao ny fahatsapana anao dia zavatra tsy maintsy andramana, esorina ny tahotra sy ny voaly ary mivoaka any ivelany.
I Talaikene dia mijaly amin'ireo teboka roa ireo toy ny mpanao hosodoko iray izay acrylic ho toy ny fitaovam-piadiana fiadiana volo miaina ny tsy fandriam-pahalemana, tandindona ary hevitra izay ifandraisan'ny maro amin'ny halalin'ny vehivavy. Endri-pitenenana tena izy izay ahitantsika ny tenantsika voakitika rehefa mijery ny iray amin'ireo sangan'asany. Fijery tsy misy fitsaharana sy lalina miaraka amin'izay.
"Ny tsiambaratelon'ny fahaterahana" dia ny Asan'ny lohan'i Talaikene amin'ity lahatsoratra ity, saingy misy maro hafa izay zaraiko eto ho an'ny mpanao hosodoko saro-kenatra ary teraka tao amin'ny olon-kafa ny zavakanto na dia te-hiafina aza izy eo am-piandohana toy ny aotirisy miraikitra amin'ny tany ny lohany.
Asa tsara tarehy, be pitsiny, tsy manam-paharoa ary an'ohatra izay ahafahana manangona fihetseham-po sy fomba fijery maro. Manelingelina toy ny mpanakanto maro hafa izay mikaroka ny psyche sy ny fitondran-tena amin'ny antony sasany hanandrana hamantatra amin'ny hafa.
tsy tsy hita ny surrealism hitondra antsika alohan'ny andalan-tsoratra samihafa ary inona ny fikarohana ilay biby amin'ny fihetsiky ny olona manodidina. Io fivoarana io amin'ireo jamba jamba izay ahitan'ny sasany maso iray, fa ny iray kosa mijery ny mpijery miaraka amin'ny zanany roa.
Manana ny tranokala Talaikene ianao avy amin'ity rohy ity. Asa manokana amin'izay ianao dia mila maka fotoana tsara hahitana ny zavatra atolotray antsika sy ny fahatsapana raisin'ny olona iray manoloana ny iray amin'ireo sanganasany.
Will Winon Mitarika antsika amin'izany ahiahy izany fa momba ny hyperrealism.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny endrika mampivarahontsana an'i Jolanta Talaikiene
Ilaina ho an'ny mpamorona: katalaogy Pantone amin'ny Internet maimaim-poana